Wararka - Fiberglass -ka farsamada dabaysha
Geedi socodka dabaysha waa in uu ahaadaa mid ka mid ah geeddi -socodka wax -soo -saarka oo ka kooban matrix. Waxaa jira saddex qaab oo waaweyn oo loo leexdo, dabaysha dabaysha, dabaysha diyaaradda iyo dabaysha isdaba -joogga. Saddexda hab waxay leeyihiin astaamo u gaar ah, iyo habka qalooca qoyan ayaa ah midka ugu badan ee la isticmaalo sababta oo ah shuruudaha qalabka fudud iyo qiimaha wax soo saarka oo hooseeya.
Geedi socodka dabaysha cabbirka waa mid ka mid ah hababka ugu waaweyn ee wax-soo-saarka ee walxaha isku-dhafan ee cusbi ku salaysan. Waa nooc ka mid ah fiilo joogto ah ama cajalad marooyin ah oo lagu dhajiyey xabagta xabagta oo hoos imanaysa xaaladda xiisadda la kontoroolay iyo qaabka xarriiqda ee la go'aamiyey, ka dibna si joogto ah, si isku mid ah oo joogto ah u dhaawacaysa caaryada ama dahaarka, ka dibna heerkul cayiman Waxaa lagu daaweeyaa hoosta deegaanka si uu u noqdo hab wax lagu dhejiyo oo isku dhafan oo loogu talagalay wax soo saarka qaab gaar ah. Jaantuska jadwalka ee geeddi-socodka wax-ka-beddelka wareegga 1-1.
Waxaa jira saddex qaab oo dabaysha ugu waaweyn (Jaantuska 1-2): dabaysha hoop, dabaysha duullimaadka iyo dabaysha iswiijinta. Qalabka xoojinta boogta ayaa si joogto ah loogu dhaawacaa caaryada asaasiga ah xagasha u dhow 90 digrii (badiyaa 85-89 digrii) oo leh dhidibka mandrel-ka. Jihada gudaha ayaa si joogto ah loogu dhaawacaa caaryada asaasiga ah, iyo walxaha xoojinta dhaawaca nabarka oo sidoo kale ah mid ku dheggan labada daraf ee caaryada asaasiga ah, laakiin waxaa si joogto ah loogu dhaawacaa caaryada asaasiga ah ee xaalad isdaba -joog ah oo ku taal caaryada asaasiga ah.
Horumarinta tiknoolajiyadda dabaysha ee dabaysha ayaa si dhow ula xiriirta horumarinta qalabka xoojinta, hababka cusbi iyo ikhtiraacyada farsamada. In kasta oo boqortooyadii Han ay ka jirtay geedi socod lagu dhalan -rogi lahaa alwaaxyo dhaadheer oo leh xariir bamboo dhaadheer iyo xariir dhoobada ah oo lagu qurxiyay lacquer si loo sameeyo ulaha hubka dhaadheer sida Ge, Halberd, iwm, ma ahayn ilaa 1950 -meeyadii in xarigga dabayshu socoto geedi socodku runtii wuxuu noqday teknolojiyad wax soo saar oo isku dhafan. . Sannadkii 1945, tiknoolojiyadda dabaysha loo yaqaan 'filament winding technology' ayaa loo isticmaalay in lagu guuleysto soo saaridda hakinta giraangiraha guga. Sanadkii 1947 -kii, waxaa la hindisay mashiinkii ugu horreeyey ee dabaysha lagu duubo. Iyada oo la horumarinayo fiilooyin wax-qabad sare leh sida fiber carbon iyo fiber aramid iyo soo bixitaanka mashiinnada dabaysha ee kombiyuutarrada gacanta ku haysa ee microcomputer-ka, geedi socodka dabaysha, sida farsamaynta waxsoosaarka walxaha isku-dhafan oo leh heer sare oo wax-soo-saar farsameysan, ayaa si dhakhso leh loo horumariyey. Dhammaan aagagga suurtogalka ah ayaa la dabaqay.
Marka loo eego xaaladaha kiimikada iyo jirka ee kala duwan ee matrix-ka cusbada inta lagu jiro dabaysha, habka loo leexinayo waxaa loo qaybin karaa saddex nooc: qalalan, qoyan iyo semi-qalalan:
1. Habka qallalan
Dabaysha qallalan waxay isticmaashaa cajalad dunta oo hore loo marsiiyey oo horay loo qooyay oo ku jirta marxaladda B. Cajaladda prepreg-ga waxaa la soo saaray oo lagu keenay warshad ama aqoon isweydaarsi gaar ah. Xilliga qalalan ee qalalan, cajaladda prepreg waxay u baahan tahay in la kululeeyo oo la jilciyo mashiinka dabaysha ka hor inta aan lagu dhaawacin caaryada asaasiga ah. Maaddaama ay ku jirto xabagta, xajmiga cajaladda iyo tayada cajaladda prepreg ayaa la ogaan karaa oo la baari karaa ka hor inta aan la fuulin, tayada badeecada ayaa si ka saxsan loo xakamayn karaa. Wax-soo-saarka wax-soo-saarka qalalan ee qallalan ayaa sarreeya, xawaaraha loo rogay wuxuu gaari karaa 100-200m/min, jawiga shaqaduna waa nadiif. Si kastaba ha ahaatee, qalabka qalalan ee qallalan ayaa aad u dhib badan oo qaali ah, iyo awoodda xiirinta dhexda ee alaabta nabarka ayaa iyaduna hooseysa.
Dabaysha qoyan waa in la xidh -xidhaa fiilooyinka, lagu rusheeyaa xabagta, oo si toos ah loogu dul saaraa caaryada asaasiga ah ee ku hoos jira xakamaynta xiisadda, ka dibna adkee oo qaabee. Qalabka loogu talagalay dabaysha qoyan waa mid fudud, laakiin sababta oo ah cajaladda ayaa dhaawacantay isla markii la quusiyay, way adag tahay in la xakameeyo oo la baaro waxyaabaha xabagta ku jira ee badeecada inta lagu jiro geedi socodka qaloocinta. Isla mar ahaantaana, marka dareeraha xabagta ku adkaado, way fududahay in la sameeyo cilado sida goobooyin iyo daloolo ku jira sheyga. , Xiisaddu ma sahlana in la xakameeyo xilliga dabaysha. Isla mar ahaantaana, shaqaaluhu waxay ka hawlgalaan jawi ay dareerayaashu uumi baxayaan oo fiilooyin gaagaaban duulayaan, oo xaaladda shaqaduna ay liidato.
Marka la barbardhigo geedi socodka qoyan, habka nus-qallalan wuxuu ku darayaa qalab qalajinaya waddada laga soo bilaabo fiyuus-ku-dhejinta ilaa dabaysha ilaa caaryada asaasiga ah, taas oo asal ahaan ka saarta dareeraha xabagta dunta. Marka la barbardhigo habka qallalan, habka nus-qallalan kuma tiirsanaado qalab dhammaystiran oo ah habka geedi-socodka prepreg. In kasta oo nuxurka xabagta ee alaabtu ay adag tahay in si sax ah loo xakameeyo sida habka qoyan ee geedi socodka, oo ay jiraan qalab dheeri ah oo qalajinta dhexe oo ka badan habka qoyan, xoojinta foosha shaqaalaha ayaa ka weyn, laakiin cilladaha sida goobooyin iyo daloolooyin ku jira badeecada ayaa si weyn hoos loogu dhigay.
Saddexda hab waxay leeyihiin astaamo u gaar ah, iyo habka qalooca qoyan ayaa ah midka ugu badan ee la isticmaalo sababta oo ah shuruudaha qalabka fudud iyo qiimaha wax soo saarka oo hooseeya. Faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka saddexda hab ee geedi socodka qalooca ayaa lagu barbardhigay Shaxda 1-1.
Codsiga ugu muhiimsan ee geedi socodka la xirrira fuuli jiray
1. Haanta kaydka FRP
Kaydinta iyo gaadiidka cabitaannada kiimikada ah ee kiimikada ah, sida alkalis, cusbada, asiidhyada, iwm, taangiyada birtu way fududdahay in la qudhmi karo oo la daadin karo, nolosha adeeguna aad bay u gaaban tahay. Qiimaha lagu beddelayo birta birta ah ayaa ka sareysa, saameyntuna uma fiicna tan alaabta isku dhafan. Fiber-nabarka galaaska batroolka ee dhulka hoostiisa ah oo la xoojiyay taangiga kaydinta caagga ah ayaa ka hortagi kara daadinta batroolka waxayna ilaalin kartaa isha biyaha. Taangiyada kaydinta ee FRP oo laba-derbi ah iyo tuubooyin FRP oo ay sameeyeen hannaanka dabaysha ayaa aad loogu isticmaalay saldhigyada gaaska
2. Tuubooyinka FRP
Badeecadaha biibiile-nabarka ayaa si weyn loogu adeegsadaa dhuumaha sifeynta saliidda, dhuumaha saliidda kiimikada ee batroolka, dhuumaha biyaha, iyo dhuumaha gaaska dabiiciga ah sababtuna waa xooggooda sare, daacadnimadooda, wax-qabad aad u wanaagsan oo dhammaystiran, si sahlan si loo gaaro wax-soo-saarka warshadaha oo hufan, iyo kharashyada hawlgalka guud oo hooseeya. Iyo walxo adag (sida dambaska duqsiga iyo macdanta) dhuumaha gaadiidka iyo wixii la mid ah.
3. Alaabooyinka cadaadiska FRP
Geedi socodka dabaysha ayaa loo isticmaali karaa in lagu soo saaro maraakiibta cadaadiska FRP (oo ay ku jiraan maraakiibta goobaabinta) iyo alaabooyinka tuubooyinka cadaadiska FRP ee cadaadiska saaran (cadaadiska gudaha, cadaadiska dibadda ama labadaba).
Maraakiibta cadaadiska FRP waxaa inta badan loo adeegsadaa warshadaha milatariga, sida madaafiicda mishiinka gantaalaha ee adag, qolofka matoorka gantaalka, maraakiibta cadaadiska FRP, madaafiicda cadaadiska dibadda ee biyaha qoto dheer, iwm. daadato ama waxyeello ku timaad cadaadis gaar ah, sida dhareynta biyaha badda oo dib loo rogo tuubooyinkii osmosis -ka iyo tuubooyinka rididda gantaallada. Astaamaha aadka u wanaagsan ee agabyada isku -dhafan ee horumarsan ayaa awood u siiyay in lagu guuleysto madaafiicda matoorka gantaalaha iyo taangiyada shidaalka ee qeexitaanno kala duwan oo ay diyaariyeen hannaanka dabaysha, oo noqday jihada ugu weyn ee horumarinta matoorka hadda iyo mustaqbalkaba. Waxaa ka mid ah guryaha matoorrada lagu hagaajin karo oo yar sida dhowr sentimitir oo dhexroor ah, iyo guryaha matoorka ee gantaallada gaadiidka waaweyn sida 3 mitir dhexroor.
Habka dayactirka ee FRP biibiilaha dabaysha
1. Sababaha ugu waaweyn ee dusha dheggan ee alaabta isku dhafan waa sida soo socota:
a) Qoyaan badan oo hawada ku jira. Sababtoo ah uumiga biyaha ayaa leh saamaynta dib -u -dhigga iyo ka -hortagga polymerization -ka cusbada polyester -ka aan la dhergin iyo resin epoxy, waxay xitaa sababi kartaa dhejis joogto ah dushiisa, iyo cillado ay ka mid yihiin daaweyn aan dhammaystirnayn oo badeecada ah muddo dheer. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo in soo -saarka alaabada isku -dhafan la fuliyo marka qoyaanka qaraabadu uu ka hooseeyo 80%.
b) Wax aad u yar oo ka samaysan faleenka ku jira xabagta polyester -ka aan la dhergin ama wax -soo -saarka ma buuxin shuruudaha, taasoo keentay in la joojiyo oksijiinta hawada. Ka sokow ku -daridda qaddar saxan oo paraffin ah, habab kale (sida ku -daridda cellophane ama filim polyester) ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa in laga sooco dusha alaabta hawada.
c) Qiyaasta wakiilka dawaynta iyo dardar -geliyuhu ma buuxiyo shuruudaha, sidaa darteed qiyaasta waa in si adag loo xakameeyaa iyada oo la raacayo qaacidada ku qeexan dukumintiga farsamada marka la diyaarinayo xabagta.
d) Maaddada polyester -ka ee aan la buuxin, styrene aad u badan ayaa kacsan, taas oo keenta monomer styrene oo aan ku filnayn cusbada. Dhinaca kale, cusbi waa in aan la kululayn ka hor gelation. Dhinaca kale, heerkulka cimiladu waa inaanu aad u sarrayn (badiyaa 30 darajo Celsius ayaa habboon), iyo xaddiga hawo -qaadistu waa inaysan aad u weynayn.
2. Waxaa jira badeecooyin badan oo xumbo ah, sababahana waa sida soo socota:
a) Xumbooyinkii hawada si buuxda looma wado, oo lakab kasta oo faafinta iyo dabaysha waa in si isdabajoog ah loogu duuduudaa rullaluistemadka. Rullaluhu waa in laga dhigaa nooc zigzag wareeg ah ama nooc jeexitaan dheer ah.
b) Isku -darka resinku aad buu u weyn yahay, oo goobooyinkii hawada ee la soo geliyey xabagta lama kaxayn karo marka la walaaqayo ama la cadayanayo. Waxaad u baahan tahay inaad ku darto qaddar ku habboon oo dareere ah. Dareeraha caagga polyester -ka ee aan la buuxin waa styrene; Dareeraha resin epoxy wuxuu noqon karaa ethanol, acetone, toluene, xylene iyo kuwa kale ee aan falcelin lahayn ama glycerol ether-ku-beddelayaasha falcelinta leh. Dareeraha resin furan iyo resin phenolic waa ethanol.
c) Xulashada qalabyada xoojinta oo aan habboonayn, noocyada qalabka xoojinta ee la isticmaalay waa in dib loo eegaa.
d) Habka hawlgalku waa mid aan habboonayn. Iyada oo la eegayo noocyada kala duwan ee xabagta iyo qalabka xoojinta, hababka habsocodka habboon sida daloolinta, cadayashada, iyo xagal rogid waa in la xushaa.
3. Sababaha hoos -u -dhaca badeecadaha waa sida soo socota:
a) Dharka fiber-ka horay looma daaweyn, ama daaweyntu kuma filna.
b) Xiisadda marada ayaa ah mid aan ku filnayn inta lagu jiro geedi socodka qalooca, ama ay jiraan xumbooyin aad u badan.
c) Qaddarka cusbiyuhu waa mid aan ku filnayn ama isku -dheelitirnaanta ayaa aad u sarreysa, oo fiber -ku ma buuxo.
d) Qaacidadu waa mid aan caqli gal ahayn, taasoo keenta wax -qabadka isku -xirnaanta oo liidata, ama xawaaraha daawaynta aad u dhakhso badan ama aad u gaabis ah.
e) Inta lagu jiro daaweynta ka dib, xaaladaha geedi socodku waa kuwo aan habboonayn (sida caadiga ah daaweynta kuleylka dhicis ah ama heerkul aad u sarreeya).
Iyadoo aan loo eegin delamination-ka ay sababtay sabab kasta ha noqotee, delamination-ka waa in si fiican loo saaraa, iyo lakabka resin ee ka baxsan aagga cilladdu waa in lagu nadiifiyaa mashiinka xagal ama mashiinka wax lagu nadiifiyo, ballaadhku kama yaraan 5cm, ka dibna dib-u-dhig shuruudaha habka. Dabaqa
Iyadoo aan loo eegin cilladaha kor ku xusan, tallaabooyin habboon ayaa la qaadayaa si gebi ahaanba meesha looga saaro si loo buuxiyo shuruudaha tayada.
Sababaha iyo xalalka delamination -ka ay keenaan dhuumaha FRP
Sababaha kala -goynta tuubooyinka ciidda ee FRP:
Sababaha: ① Cajaladdu waa mid aad u gabowday; Amount Qaddarka cajaladdu aad bay u yar tahay ama uma sinna; Temperature Heerkulka roogga kulul aad buu u hooseeyaa, cusbi si fiican uma dhalaalin, cajaladduna si fiican uguma dhegi karto xudunta; TensionDhibka cajaladdu waa yar yahay; Qaddarka wakiilka sii daaya saliidda Aad u badan ayaa wasakheeya dharka asaasiga ah.
Xalka: content Waxyaalaha koolada ah ee marada dhejiska ah iyo waxa xabagta ee xabagta dhalaalaysa waa inay buuxiyaan shuruudaha tayada; Temperature Heerkulka rullaluistemka kulul waxaa lagu hagaajiyaa meel sare, si marka marada dhejiska ahi uga gudubto roogga kulul, marada dhejiska ayaa u jilicsan oo u dheggan, oo xudunta tuubada si adag ayaa loogu dhejin karaa. In la hagaajiyo xiisadda cajaladda; NotHa isticmaalin wakiil saliid lagu sii daayo ama yaree qiyaasta.
Ku xumaynaya derbiga gudaha tuubada dhalada
Sababtu waxay tahay maryaha hoggaamiyuhu uma dhoweyn geerida.
Xalka: U fiirso qalliinka, hubi inaad si adag ugu dhegto maro hoggaamiyaha
Sababta ugu weyn ee loo xumbaynayo ka dib markii la daaweeyo FRP ama xumbada ka dib marka la daaweeyo tuubada ayaa ah in waxyaabaha aan caadka lahayn ee cajaladdu aad u weyn tahay, oo heerkulka duuban uu hooseeyo, xawaaraha duudduubkuna degdeg yahay. . Marka tuubada la kululeeyo oo la adkeeyo, baylaheeda soo hadhay waxay la bararaan kulayl, taasoo keenta in tuubadu xumbo yeelato.
Xalka: Xakamee waxa ku duuban cajaladda, si habboon u kordhi heerkulka duudduuban oo hoos u dhig xawaaraha rogid.
Sababta loo duuduubay tuubada ka dib markii la daaweeyo ayaa ah xabagta sare ee xabagta ku jirta. Xalka: Si habboon u yaree koolada ku duuban cajaladda oo yaree heerkulka duuban.
FRP oo aan u qalmin u adkaysta danab
Sababaha: tension Xiisadda cajaladda inta lagu jiro duudduubku kuma filna, heerkulka duubitaanku wuu hooseeyaa ama xawaaraha duudduubku waa degdeg, sidaa darteed isku -xidhka marada iyo marada ma fiicna, xaddiga hadhay ee kacsanaanta tuubada ayaa weyn; Tube Tubada si buuxda looma bogsado.
Xalka: ① Kordhi xiisadda cajaladda, kordhiso heerkulka duubista ama hoos u dhig xawaaraha rogid; D Hagaaji habka daaweynta si aad u hubiso in tuubada si buuxda loo bogsaday.
Arrimaha ay tahay in la xuso:
1. Maadaama cufnaanta hooseysa iyo maaddada khafiifka ah, way fududahay in lagu rakibo tuubooyinka FRP meelaha leh heerarka biyaha dhulka hoose, iyo tallaabooyinka ka-hortagga sabayn kara sida godadka ama biyo-mareenka biyaha roobka waa in la tixgeliyaa.
2. Marka la dhisayo furitaanka shabadaha tuubooyinka birta galaaska ah ee la rakibay iyo dayactirka dildilaaca dhuumaha, waxaa laga rabaa inay la mid noqoto xaaladaha qalalan ee warshadda oo dhan, oo loo baahan yahay in cusbada iyo marada fiber -ka ee la isticmaalo muddada dhismaha la daaweeyo 7 -8 saacadood, iyo dayactirka goobta iyo dayactirka guud ahaan way adag tahay in la buuxiyo shardigan.
3. Qalabka ogaanshaha dhuumaha dhulka hoostiisa mara ayaa inta badan ogaada dhuumaha biraha. Qalabka ogaanshaha dhuumaha aan birta ahayn waa qaali. Sidaa darteed, hadda suurtagal maaha in la ogaado tuubooyinka FRP ka dib markii lagu aasay dhulka. Qaybaha kale ee dhismaha ee xiga waa kuwo aad u fudud in la qodo oo la waxyeeleeyo dhuumaha inta dhismuhu socdo.
4. Awoodda kahortagga ultraviolet ee tuubada FRP waa mid liidata. Waqtigan xaadirka ah, tuubooyinka FRP ee dusha sare ku dhejisan waxay dib u dhigaan waqtiga gabowga iyaga oo ka dhigaya 0.5mm lakab hodan ah oo qaro weyn leh iyo nuugista shucaaca ultraviolet (lagu farsameeyo warshadda) dushiisa. Waqtiga uu socdo, lakabka hodanka ah ee hodanka ah iyo nuugista UV ayaa la baabi'in doonaa, taas oo saamayn ku yeelan doonta adeeggeeda.
5. Shuruudaha sare ee qoto dheer ee daboolaya ciidda. Guud ahaan, carrada ugu hoosaysa ee daboolaysa tuubooyinka birta galaaska ee fasalka SN5000 ee ka hooseysa waddada guud ma aha wax ka yar 0.8m; ciidda ugu qoto dheer ee daboolaysa kama badna 3.0m; ciidda daboolida ugu hooseysa ee tuubada birta galaaska ee fasalka SN2500 ma aha wax ka yar 0.8m; Ciidda ugu qoto dheer ee daboolaysa waa 0.7m iyo 4.0m siday u kala horreeyaan).
6. Ciidda dib -u -buuxinta waa inaysan ku jirin walxo adag oo ka weyn 50mm, sida leben, dhagaxyo, iwm, si aysan u waxyeeleyn darbiga dibadda ee dhuumaha.
7. Ma jiraan wax warbixinno ah oo ku saabsan adeegsiga baaxadda leh ee ay leeyihiin shirkadaha waaweyn ee biyaha ee dalka oo dhan tuubooyinka FRP. Maadaama ay tuubooyinka FRP yihiin tuubooyin cusub, nolosha adeegga weli lama yaqaan.
Sababaha, hababka daaweynta iyo tallaabooyinka ka-hortagga daadinta dhuumaha birta galaaska ee cadaadiska sarreeya
1. Falanqaynta sababta keentay daadashada
Tuubooyinka FRP waa nooc ka mid ah fiber galaas joogto ah oo la xoojiyay tuubo -cusbi heerkulbeegga. Aad bay u jilicsan tahay mana u adkaysan karto saamaynta dibedda. Inta lagu jiro isticmaalka, waxaa saameeya arrimo gudaha iyo dibaddaba ah, marmarka qaarkoodna baxsad (baxsasho, dillaac) ayaa dhacda, taas oo si xun u wasakhaysa deegaanka oo saamaysa wakhtiga duritaanka biyaha. Qiimee Baadhitaan iyo falanqayn goobta ka dib, daadinta ayaa inta badan sabab u ah sababaha soo socda.
1.1, saameynta waxqabadka FRP
Maadaama FRP ay tahay walxo isku dhafan, maaddada iyo geeddi -socodka waxaa si dhab ah u saameeya xaaladaha dibadda, inta badan waxaa sabab u ah arrimaha soo socda ee saamaynta leh:
(1) Nooca cusbi dardaro iyo heerka bogsashadu waxay saamayn ku yeelataa tayada cusbi, walxaha wax lagu nadiifiyo iyo dawaynta, iyo fiber galaasku wuxuu xoojiyay caanaha caagga ah ee caagga ah.
) Qalab kala duwan iyo shuruudo warbaahineed oo kala duwan ayaa sidoo kale sababi doona in farsamaynta habaynta ay noqoto mid adag.
(3) Saamaynta deegaanku badiyaa waa saamaynta deegaanka ee dhexdhexaadinta wax -soo -saarka, heerkulka hawada, iyo huurka.
(4) Saamaynta qorshaha socodsiinta, haddii qorshaha farsamaynta farsamaynta uu yahay mid macquul ah ama aan toos u saamaynayn tayada dhismaha.
Sababo la xiriira waxyaabaha, hawlgallada shaqaalaha, saamaynta bay'ada, iyo hababka kormeerka, waxqabadka FRP ayaa hoos u dhacay, waxaana jiri doona tiro yar oo ah guuldarrooyin maxalli ah oo derbiga tuubada ah, dildilaacyo mugdi ah oo ku jira boolal gudaha iyo dibaddaba, iwm. , kuwaas oo ay adag tahay in la helo xilliga kormeerka, iyo marka la isticmaalayo oo keliya. Waxaa la shaacin doonaa inay tahay dhibaatada tayada badeecada.
1.2, burbur dibadeed
Waxaa jira xeerar adag oo loogu talagalay gaadiidka fog-fog iyo raridda iyo dejinta tuubooyinka birta dhalada ah. Haddii aadan isticmaalin dharbaaxayaasha jilicsan iyo gaadiidka fog-fog, ma isticmaashid looxyo alwaax ah. Dhuumaha gaadiidka xamuulka qaada ayaa ka sarreeya 1.5M korka. Inta lagu jiro dib -u -buuxinta dhismaha, masaafada dhuumaha waa 0.20mm. Dhagxaanta, lebenkii, ama dib -u -buuxintii tooska ahayd waxay dhaawac dibadeed u geysan doonaan tubbada birta dhalada ah. Intii dhismuhu socday, lama ogaan waqtigii loo baahnaa in culayska xad -dhaafka ahi dhacay oo baxsadku dhacay.
1.3, arrimaha naqshadeynta
Cirbadaha biyaha ee cadaadiska sarreeya waxay leeyihiin cadaadis sare iyo gariir weyn. Tuubooyinka FRP: tuubooyin is daba joog ah, oo si lama filaan ah ugu beddelaya jihooyinka axial iyo lateral si ay u dhaliyaan riixid, taas oo keenta in dunta ay kala go'do oo dillaacdo. Intaa waxaa dheer, iyada oo ay ugu wacan tahay agabyada gariirka ee kala duwan ee ku jira qaybaha isku -xirka ee isku -beddelka birta, saldhigyada cabbiraadda, madax -dhaqmeedyada, qulqulka iyo tuubooyinka birta galaaska, dhuumaha birta galaaska ayaa daadanaya.
1.4. Arrimaha tayada dhismaha
Dhismaha tuubooyinka FRP waxay si toos ah u saamaysaa nolosha adeegga. Tayada dhismaha ayaa inta badan lagu muujiyaa in qotada la aasay aysan ku xirnayn naqshadda, sanduuqa ilaalada aan lagu xirin waddooyinka waaweyn, kanaalada dheecaanka, iwm. . laguma darin sanduuqa si waafaqsan tilmaamaha. Sababta dhuuqitaanka tuubada FRP.
1.5 Arrimaha dibadda
Dhuumaha FRP ee dhuumaha biyaha ayaa mara meel aad u ballaaran, badankooduna waxay u dhow yihiin dhul beereed ama godad biyo -mareen ah. Boostada calaamadda ayaa la xaday muddo dheer oo adeeg ah. Magaalooyinka miyiga iyo tuulooyinka ayaa adeegsada farsameynta si ay u fuliyaan kaabayaasha ilaalinta biyaha sanad walba, taas oo keenta burburka dhuumaha iyo daadinta.